Arsenal oo Bayern Munich ka badisay - BBC Somali
Arsenal oo Bayern Munich ka badisay
21 Oktoobar 2015
Image caption Giroud ayaa goolka koobaad ka dhaliyay Bayern
Kooxda Arsenal ayaa dib boorka isaga jaftay si ay usoo celiso rajadeeda ciyaaraha horyaalka Yurub, kaddib markii ay ka badisay Bayern Munich oo ay kula ciyaartay karoonka Emirates.
Arsenla waxa ay rajo ka qabtaa inay u gudubto wareegga 16ka, iyadoo wajaheysa loolan adag kaddib markii laga badiyay labaddii kullan ee ugu horeysay.
Kulamadaasi mid ka mid ah waxaa ka badisay Dinamo Zagreb iyo Olympiakos oo ay gurigeeda ku marti qaaday.
Laakiin kooxda uu macalinka u yahay Arsene Wenger, waxa ay ka jawaabeen kulamadii laga badiyay, waxayna ku badaleen in Mayern ay sida ay rabaan uga badiyaan, ayna waxba kama jiraan ka soo qaadaan ciyaarihii hore ee garaacay.
Image caption Goolka labaadna waxaa dhaliyay Ozil
Bayern ayaa ciyaarta ku wanaagsaneyd, laakiin Arsenal waxa ku dadaashay inay goolasha ay badiyaan kaddib markii Olivier Giroud oo badal ku soogalay uu daqiiqadii 77aad uu ka faa’ideystay qaladaadka dhifka ah ee uu sameeyo goolhaye Neuer kaddib markii uu celin waayay laad xor ah oo uu soo tuuray Santi Cazorla.
Guusha Arsenal waxa ay cadaatay markii daqiiqadaha dhimashada uu Mesut Ozil uu leexiyay kubad uu soo laalay Bellerin goolhaye Neuer na uu soo celiyay markii ay xariiqinta dhaaftay, taas oo la go’aamiyay inay gool tahay.
Arsenal ayaa si weyn ugu diirsatay goolhaye Petr Cech, oo badbaadiyay kubado badan oo ay soo tureen Bayern.
Waxa uu si wanaagsan u celiyay kubado ay soo laaleen, Thiago Alcantara iyo Arturo Vidal.
Neuer dhankiisa waa uu daldaalay ka hor inta uusan qaladka sameyn, gaar ahaan markii si la yaab leh uu u qabtay kubadda madaxa uu ku dhuftay Theo Walcott.